कोरोना बीमा कसरी गर्ने, के-के छन् फाइदा? :: Setopati
कोरोना बीमा कसरी गर्ने, के-के छन् फाइदा? बीमा गर्ने ६ लाख नाघे, ३५ बढीले दावी भुक्तानी लिए
कोरोना बीमा गर्नेहरूको संख्या ६ लाख नाघेको छ। पछिल्लो समय संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा बीमा गर्न पनि सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ।
गत वैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमाको औपचारिक रूपमा सुरुआत गरिएको हो। त्यसयता साउन १६ गतेसम्म ६ लाख ६ हजारले कोरोना बीमा गरेका बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए।
२० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू संलग्न 'पुल' मार्फत कोरोना बीमा हुने गरेको छ। सोवापत ३४ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ। कोरोना बीमा गरेकाले दावी भुक्तानी समेत लिँदै गएको अधिकारीले बताए।
'बीमा गर्नेलाई पिसिआर परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिए दावी गर्न सक्छन्। भुक्तानी लिनेको संख्या पनि बढिरहेको छ,' उनले भने, '३५ जनाभन्दा बढीले दावी भुक्तानी लिइसकेका छन्।'
कोरोना बीमा ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँको गर्न सकिन्छ। ५० हजार रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्ने व्यक्तिले ५ सय रुपैयाँ शुल्क (प्रिमियम) तिर्नुपर्छ। त्यस्तै १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्नेले १ हजार तिर्नुपर्छ।
यदि परिवारकै बीमा गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति तिर्ने शुल्क कम पर्छ। दुईभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारले ५० हजारको कोरोना बीमा गर्दा प्रिमियम प्रति सदस्य ३ सय रूपैयाँ लाग्छ भने १ लाखको गर्न ६ सय रूपैयाँ लाग्छ। सो रकममा २० रुपैयाँ विविध शुल्क थपिन्छ।
अहिले तिरेको यो शुल्कले चैत मसान्तसम्म मात्रै बीमा दावी गर्न पाइन्छ। चैत मसान्तपछि कोरोना बीमा सञ्चालन गर्ने, नगर्ने भन्नेबारे निश्चितता भइसकेको छैन।
कोरोना बीमा गरेको दिनदेखि १५ दिनसम्म भने दावी गर्न पाइँदैन। अर्थात बीमा स्वीकृत भएको १५ दिनपछि यो वर्ष चैत मसान्तसम्म मात्रै कोरोना पुष्टि भएमा बीमा रकमका लागि दावी गर्न सकिनेछ।
कसरी गर्ने काेराेना बीमा?
सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट कोरोना बीमा गर्न सकिन्छ।
अजोड, एभरेष्ट, जनरल, हिमालयन, आइएमई जनरल, लुम्बिनी, नेसनल, नेको, नेपाल, एनएलजी, ओरियन्टल, प्रभु, प्रिमियर, प्रुडेन्सियल, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, सगरमाथा, सानिमा, शिखर, सिद्धार्थ र युनाइटेड इन्स्योरेन्सका जुनसुकै शाखाबाट बीमा गर्न सकिन्छ।
कोरोना बीमा गर्दा आफ्नो नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपी चाहिन्छ। परिवारका सदस्यको गर्दा पनि सबैको नागरिकता प्रतिलिपी जरुरत पर्छ।
कतिपय कम्पनीले अहिले अनलाइनबाटै आवेदन भर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन्।
पिसिआर परीक्षणबाट कोरोना पुष्टि भएपछि जति रकमको बीमा गरिएको हो। सो रकम प्राप्त हुन्छ। यसले लामो अवधिसम्म आइसोलेसनमा बस्दा हुने आर्थिक बोझलाई कम गर्न सघाउ पुग्नेछ।
कुन कम्पनीबाट कतिले गरे बीमा ? (साउन १६ गतेसम्म)
स्राेत: बीमा समिति